निजगढ विमानस्थल निर्माणको नाममा २ लाख रुख काट्ने तयारी ! Bizshala -
निजगढ विमानस्थल निर्माणको नाममा २ लाख रुख काट्ने तयारी !
आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ११० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्याङ्कन र मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको छ । अझै केही स्थानीयवासीको जग्गाको मूल्याङ्कन भने बाँकी छ । जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । आयोजना २०५१ देखि चर्चामा आएको हो । कोरियन कम्पनीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको लामै भए पनि काम भने शुरु हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले आयोजनालाई गति दिएपछि आलोचना शुरु भएको छ।
काठमाण्डौ । नेपालका लागि उदीयमान पर्यटन बजारको रुपमा रहेका देशहरु...